Coronavirus Niampy an’I Ihorombe ny ivony…
IHOSY Mpiadina bakalorea 8 tratran’ny Covid 19
Mpiadina Bakalorea mpianatry ny lisea ao Ranohira tonga miatrika izany fanadinam-panjakana izany ao Ihosy no fantatra fa tratry ny valan’aretina Covid 19.
Tapitra ny fahamehana Ahoana amin’izay ireo afera ara-bola goavana?
Tapitra ny fahamehana ara-pahasalamana, ka tokony havoaka amin’izay ny mangarahara.
Andry Rajoelina “Ny fahamehana no mijanona fa ireo fepetra mitohy…”
Nambaran’ny Filoha ankehitriny Andry Rajoelina omaly, fa resintsika ankehitriny ity valanaretina ity na mbola misy aza eto, ary mila mitandrina. An-dalam-pandresena,
Coronavirus tao anatin’ny herinandro 131 voa, 16 marary mafy, 01 maty
Iray namoy ny ainy vokatry ny valanaretina covid-19 teo anelanelan’ny 10-16 oktobra 2020, araka ny tatitry ny Pr Vololontiana Hanta, izay isaky ny sabotsy sisa no hanaovana azy.
Tranga vaovao 63 no notaterin’ny Pr Vololontiana Hanta omaly, hita tamin’ny fitiliana 404, manome taham-pahavoazana 15,59%.
Teto Antananarivo Faritra Analamaga, 01 Antsiranana tany DIANA, 56 Fianarantsoa (02 Faritra Matsiatra Ambony, 54 Faritra Ihorombe), Fitiliana Genexpert nanomboka ny 02 Aogositra ireo 54 tany Ihorombe ireo, ary izao vao azo ny vokatra, hoy ny Pr Volontiana Hanta. Na izany aza, azo ambara ho betsaka izany 54 izany. Ankoatra ny any amin’ny Faritra Diana sy SAVA, dia isan’ireo toerana misy tranga maro any. 78182 ny fitambaran’ny fitiliana vita hatramin’izay, ary 16348 ny tranga manome taham-pahavoazana 20,91%, raha ny amin’ny ankampobeny.
FARITRA 2 SISA MISY IREO MARARY MAFY
Miisa 25 ny sitrana vaovao 05 Vakinankaratra, 02 Itasy, 01 Alaotra Mangoro (Moramanga), 05 Faritra Ihorombe, 04 SAVA, 08 DIANA. 14947 no sitrana ny sitrana hatramin’izay manome taha 91,43%. Miisa 1170 (7,15%) no mbola manaraka fitsaboana. Mijanona ho 17 ny "formes graves" ka 11 eto Analamanga, 06 Matsiatra Ambony (Fianarantsoa).